Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa maraya shahaadada TENAA | Androidsis
Oppo waxay soo bandhigeen taleefannada casriga ah ee Reno 3 iyo Reno 3 Pro maalmihii ugu dambeeyay ee Diseembar. Soo saaraha Shiinaha ayaa ogaa waxa ay ka hadli doonaan, labada terminaal ayaa ah qaab si hufan loogu daydo in lagu xisaabtamo wax kasta oo ay u soo bandhigaan xagga waxqabadka iyo ku imaanshaha qiime wanaagsan.
Hadda leh sumad waxay qalab u gudbisay TENAA si loo xaqiijiyo ka hor inta aan si rasmi ah loo bilaabin, wax caadi ah ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin. BBK Elektarooniggu way cadahay hal shay, waxay rabtaa inay layaab ku samayso qalab cusub wayna samayn doontaa kadib markay shaacisay ugu yaraan laba nooc oo isku mid ah
Faa'iidooyinka Oppo cusub waa la ogyahay
Nambarka nambarku waa Oppo PCLM50, Faahfaahino badan ayaa lagu ogaadaa kadib markay marayaan FCC. Oppo-kan cusub wuxuu ka dheereyn doonaa Reno 3 wuxuuna yeelan doonaa 48-megapixel sensor sida caadiga ah, waa isla kii uu ku rakibay Pro-ka kana hooseeya Reno 3-ka.
Telefoonkan cusub wuxuu leeyahay processor gaaraya 2,4 GHz, 5G chip ujeedkiisuna yahay in lagu rakibo Snapdragon 765G oo ka socda shirkadda soo saarta Qualcomm. RAM-ka badeecadani waa 8 GB iyo 128 illaa 256 GB oo keyd ah, laakiin kuma jiraan booska MicroSD.
Waxaa ka mid ah dareemayaal ka mid ah Telefoonka casriga ee cusub ee Oppo ayaa ah kan ugu weyn oo leh 48 megapixels, 8-megapixel snapper oo leh kamarad aad u ballaadhan iyo laba dareemayaal 2-megapixel ah, mid 2 MP ah oo qoto dheer iyo mid kale oo loogu talagalay sawirrada makro, ayaa ah kan ugu dambeeya ee muhiimka ah marka la qaadayo sawirrada nooc kasta.
Dareemaha ugu weyn ee hore waa 32 megapixels, oo ku habboon sawirrada nafta iyo marka la qabanayo shirarka fiidiyowga. Taariikhda bilaabida iyo qiimaha terminalkan cusub ee Oppo oo arki lahaa nalka rubuca labaad ee sanadkan lama garanayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa soo mariya shahaadada TENAA